November 19, 2021 N88LeaveaComment on कामदार भिसामा बेलायतले माग्यो १० हजार नेपाली नर्स, कति लाग्छ खर्च तलब कति हुन्छ ?
काठमाडाैं । बेलायतले कामदार भिसामा १० हजार नेपाली नर्स माग गरेको छ । बेलायतको मागअनुसार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले नर्सलाई कामदार भिसामा बेलायत पठाउने प्रकृया थालेको जानकारी दिएको छ । वैदेशिक रोजगार पत्रकार समाजले शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको वैदेशिक रोजगारको वर्तमान अवस्था र सुधारका प्रतिवद्धता कार्यक्रममा विभागीय मन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले बेलायतमा कामदार भिसामा […]
यिनै हुन् बार परिसरभित्र पसेर वकिलहरुलाई ध’म्की दिनेहरु, कसको निर्देशनमा छिरेका थिए ?
November 19, 2021 N88LeaveaComment on यिनै हुन् बार परिसरभित्र पसेर वकिलहरुलाई ध’म्की दिनेहरु, कसको निर्देशनमा छिरेका थिए ?
काठमाडौँ । नेपाल बार एसोसिएसन परिसरभित्र पसेर कानुन व्यवसायीहरुलाई ध’म्की दिने दुई जना प’क्राउ परेका छन् । महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंको टोलीले बिहीबार राति बौद्धबाट तीर्थ ढकाल र सिताराम श्रेष्ठलाई प’ क्रा’ उ गरेको हो । ढकाल र श्रेष्ठले बिहीबार कानुन व्यवयसायीहरुलाई दुर्व्यवहार गर्दै गा’ लीग’ लौ ज मा उत्रिएका थिए । उनीहरुले वकिलहरूलाई आन्दोलन […]
November 19, 2021 N88LeaveaComment on शनिवार कुन राशिले के गर्ने ? के नगर्ने ?
शनिवार जीवनमा सतर्क रहन आवश्यक हुन्छ । यस दिन चाँडै सफलता पाउन अनुचित काम गर्नबाट बच्न, कसैलाई अति भरोसा गर्नबाट पनि बच्नु पर्दछ । यस दिन राशि अनुसार केही काम गर्नु पर्दछ भने केही काम गर्नबाट बच्नु पर्दछ । मेष राशि यस राशिका जातकले शनिवार आफ्नो कुरा राख्न पाउने अवसर पाउनेछन् । यस दिन आवश्यकता […]
शनिको प्रकोपबाट बच्नु छ, शनिबार भुलेर पनि नगर्नुस् यी काम
November 19, 2021 N88LeaveaComment on शनिको प्रकोपबाट बच्नु छ, शनिबार भुलेर पनि नगर्नुस् यी काम
शनिबार शनि देवको उपासना गर्ने दिनका रुपमा बुझिन्छ । यस दिन शनिदेवको आराधना गरे उनको कृपा प्राप्त भई नकारात्मक प्रभावबाट बच्न सकिने धार्मीक मान्यता छ । शनि देव कर्मको हिसाबले फल प्रदान गर्ने देवताका रुपमा चिनिन्छन् । नराम्रो काम गर्नेहरुसँग शनि देव रिसाउने र सजाय दिन्छन् भन्ने विश्वास गरिन्छ । तर केही उपाय गरेमा शनिका […]
एमसीसी पास गर्न दवाब दिँदै अमेरिका देउवालाई भन्याे ‘मंसिर २८ सम्म एमसीसी पास गर्नु’
November 19, 2021 N88LeaveaComment on एमसीसी पास गर्न दवाब दिँदै अमेरिका देउवालाई भन्याे ‘मंसिर २८ सम्म एमसीसी पास गर्नु’
काठमाडौँ । दक्षिण तथा मध्य एसिया मामिला हेर्ने अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) परियोजना नेपालले लिओस् भन्ने अमेरिकी चाहना भएको बताएका छन् । धेरै देशहरुले एमसीसी परियोजना सञ्चालन गर्न इच्छुक रहेको नेपाल भ्रमणमा रहेका सहायक विदेशमन्त्री लुले नेपालले लेओस् भन्ने चाहेको बताएका छन् । सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उनले एमसीसी बोर्डको ३-३ […]
देउवा, असफल, ओलीका पालामा कुर्लिने नागरिक अगुवा किन चुप लागे ?
November 19, 2021 N88LeaveaComment on देउवा, असफल, ओलीका पालामा कुर्लिने नागरिक अगुवा किन चुप लागे ?
काठमाडौँ । लोकतान्त्रिक संस्थाको शीरमा अलोकतान्त्रिक सोच र संस्कार हाबी हुँदै गएपछि यतिबेला राज्यका तीनै अंग–कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका चरम संकटमा छन् । तर नागरिक तहबाट पर्याप्त दबाव र आवाज उठ्न छोडेको छ । केपी शर्मा ओली सरकारका पालामा राज्यप्रति चरम जनआक्रोश चुलिएको थियो । करिब ६ महिनाकै अवधिमा राज्यका तीन महत्वपूर्ण अंग मध्येको व्यवस्थापिका […]
प्रधानन्यायाधीस राणाको ऐतिहासिक कदम, नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक भयाे ….
November 19, 2021 N88LeaveaComment on प्रधानन्यायाधीस राणाको ऐतिहासिक कदम, नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक भयाे ….
काठमाडाैं । बिहिबार बसेको फुलकोटकाे छलफलपछि नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक प्रधानन्यायधीशकै सहमतिमा गोलाप्रथाको माध्यमबाट इजलास र पेशी तोक्ने ऐतिहासिक कार्यको थालनी हुने भएको छ । प्रधानन्यायाधीशकै सहमतीमा पहिलोपटक नेपालको इतिहासमा इजलास सञ्चालन निष्पक्ष हुने मार्गप्रशस्त भएको हो । यो कार्यका लागि इतिहासमै चाेलेन्द्र शमसेर राणाको भूमिका निर्णायक र ऐतिहासिक देखीएको छ । राणाकै सल्लाह र सहमतिमा […]
बारको आन्दोलनमा घुसपेठ, वकिलको आक्रमणले प्रहरीको दाँत फुस्कियो
November 19, 2021 N88LeaveaComment on बारको आन्दोलनमा घुसपेठ, वकिलको आक्रमणले प्रहरीको दाँत फुस्कियो
काठमाडौं । नेपाल बार एशोसिएशनको आन्दोलनमा घसुपैठ भएको दाबी गरिएको छ । बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले आन्दोलनमा वाईसिएललाई घुसाएको र प्रहरीमाथि हातपात गर्न लगाएको बुझ्नमा आएको छ। बारको आन्दोलनले उग्र रुप नलिओस भनेर आज विहानैदेखि सुरक्षा व्यवस्था मजबुद बनाईएको थियो । तर, आन्दोलनमा उत्रिएका वकिलहरुले हातपात र आक्रमण गर्दा तीन जना प्रहरी घाईते भएका छन् । […]
पदाधिकारीमा सहमति नगरे प्यानलसहित चुनाव लड्ने घोषणा
November 19, 2021 N88LeaveaComment on पदाधिकारीमा सहमति नगरे प्यानलसहित चुनाव लड्ने घोषणा
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) को १०औं राष्ट्रिय महाधिवेशन यही मंसिर १० गतेदेखि मंसिर १२ गतेसम्म चितवनको सौरहामा हुँदैछ । महाधिवेशनको सम्पूर्ण तयारी भैसकेको छ । नेताहरु अहिले चितवन आउने जाने क्रम बढेको छ । पार्टी जीवनमा एमालेले पहिलोपटक विधान महाधिवेशन ललितपुरमा भव्य रुपमा सम्पन्न गरेर सर्वसम्मत् रुपमा विधान पारित गरेर नेतृत्व पनि सर्वसम्मत् […]